Otú nyefee Videos si camcorder ka Computer na USB / Fireware
> Resource> Nyefee> otú nyefee Videos si camcorder ka Computer
Camcorder bụghị naanị na captures vidiyo, ma obi ụtọ oge na-echeta na Edebewo maka a ndụ oge. Iji mee ka ọtụtụ n'ime gị video, ọ ga-agafere a na kọmputa. Ihe kacha ụzọ nyefee videos ka a PC bụ site na iji eriri USB ma ọ Firewire. Mgbe ahụ a na-eme, na ezi video edezi software, ị nwere ike idezi gị vidiyo na kọmputa dị ka a ọkachamara, ma ọ bụ nanị mgbe ha na TV ezinụlọ na ndị enyi.
Jikọọ camcorder ka Computer
Ihe ị ga-mkpa jikọọ gị camcorder na kọmputa:
Eriri USB ma ọ Firewire USB (IEEE 1394 USB)
Ịmụta AC ọnọ
Esi jikọọ camcorder ka Kọmputa:
Nzọụkwụ 1: Jikọọ AC Adopter gị camcorder si na-Jack na mgbidi tinyekwa (mgbidi anya), na-atụgharị na camcorder.
Nzọụkwụ 2: Jikọọ eriri / Firewire Jack gị camcorder na kọmputa na iji ọnọ USB / Firewire USB.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a gị camcorder ga-akpaghị aka achọpụtara na ga-apụta dị a na diski ike mbanye na kọmputa (na-emekarị a Ndumodu mmapụta na ala nri akuku). Ọ bụrụ na gị camcorder adịghị ghọtara site na kọmputa, wụnye ọkwọ ụgbọala na-eji ọnọ CD-ROM.
Nyefee Video si camcorder ka Computer
Mgbe camcorder ka jikọọ kọmputa gị, i nwere ike nyefee vidiyo si na camcorder na kọmputa na ala, dị nnọọ ka a na-edegharị faịlụ site na disk mbanye ọzọ. Ị nwekwara ike wụnye na-agba ọsọ ahụ nyere software dị ka Foto dị Motion Nchọgharị maka Sony camcorder na PixelaMixer maka Canon camcorder mbubata na edit video si camcorder.
Nyefee camcorder vidiyo site na iji Kaadị Reader:
Ọ bụrụ na ị ịtọ gị camcorder ka ndekọ video ka Flash ebe nchekwa dị ka Memory Stick ma ọ bụ SD Kaadị, i kwesịrị a Kaadị agụ nyefee video si flash ebe nchekwa gị na kọmputa. E nwere ọtụtụ ụdị nke kaadị na-agụ akwụkwọ na-dakọtara na ma Memory Stick na SD kaadị, na-emekarị nwere USB Jack, otú i nwere ike mfe transfer dere video na kọmputa dị ka na-arụ ọrụ Obodo disk faịlụ mgbe jikọọ USB Jack ka USB n'ọdụ ụgbọ mmiri na kọmputa gị .
Atụmatụ maka ebufe camcorder videos
1. Nyefee video si a camcorder ka a PC nwere ike weghara a otutu siri ike mbanye ohere. Bụrụ na ị nwere mpụga flash mbanye, ma ọ bụ na ọ bụ adaba isure camcorder video ka DVD, i nwere ike nyefee videos mpụga ngwaọrụ ịzọpụta siri ike mbanye ohere.
2. Ọ ga-eji a otutu usoro ego ka na-enyefe gị video si a camcorder. Ya mere, ị ga mma nso ọzọ na-agba ọsọ omume tupu transfer vidiyo na kọmputa gị.
3. Rụtụ aka na emeputa ntuziaka maka gị camcorder ịhụ ihe ụdị njikọ ị ga-mkpa nyefee camcorder video.
4. The DVD camcorder pụrụ ozugbo dekọọ vidiyo DVD maka na-egwuri egwu Blu-ray ọkpụkpọ ma ọ bụ mgbe ọkpụkpọ DVD. Nyefee e dere DVD vidiyo na camcorder na kọmputa, Wondershare Video Ntụgharị nwere ike inyere gị tọghata camcorder videos si DVD diski.
The video formats dekọrọ camcorder iche iche ukwuu dabere na dị iche iche Nsukka dị ka Sony, Canon, Panasonic. The SD definition videos-emekarị nwere AVI, MOV, mpg, MP4, MOD, wdg faịlụ ndọtị, mgbe HD definition videos Tod, MTS, M2TS na na. Nza nke video edezi software na ahịa nwere ike inyere aka edit kpọfere camcorder vidiyo na kọmputa, si ọkachamara ndị dị ka Sony Vegas na Adobe Premiere ka isi onye dị ka Video Editor.
N'ozuzu, ị pụghị ime ka SD video n'ime HD video. Ma i nwere ike tọghata HD video ka SD videos maka obere size na obere ngwaọrụ ndakọrịta ndị a edezi software ma ọ bụ iji video Ntụgharị. Ị na-atụ aro iji tọghata video ka FLV maka ibipụta online, dị ka YouTube na Facebook.
Ọ bụrụ na-ekiri camcorder video on TV bụ gị ikpeazụ nzube, i kwesịrị iṅomi camcorder videos jidesie DVD iji gị chọrọ Video ka DVD burner software.
Nyefee Photos ka iPad-apụghị Mfe